Miandry Ny Hamerenan’i Alemaina An’i Kueka Renibeny Ny Vondrom-Piarahamonina Teratany Pemón Ao Venezoelà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Febroary 2016 6:41 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Română , Español
Ny mpikambana iray ao amin'ny vondrom-piarahamonina Pemon antsoina hoe Alejandro Díaz (Kachipiú), mpianatra ao amin'ny Oniversitem-Panandraman'ny Teratany Nasionaly ao Tauca, Venezoelà, miaraka amin'i Nenibe Kueka ao Berlin, 2015. Sary nahazoana alalana.
Niteraka adihevitra betsaka tsy nampoizina momba ny fizakamanana ara-tsaina iraisan'ny vondrom-piarahamonina teratany ao Amerika Latinina sy manerana izao tontolo izao ny hiakam-pahatezerana avy amin’ilay Frantsay mpamoron-damaody sy ravaka Isabel Marant, izay voampanga ho naka tahaka rehefa nampiasa amboradrara mampiavaka an'i Oaxaca, Meksika, amin'ny iray amin'ireo tahiry navoakany.
Nitatitra ity fifandirana ity ny media nomerika, ny tambajotra sosialy eny fa na dia ny filma fohy iray aza. Tsy mahazatra loatra ity sahoan-dresaka ity, raha heverina ilay karazan-javatra resahina izay, indrisy, fa efa mahazatra loatra eo amin'ny tantaram-piarahamonina teratany.
Sombiny amin'i Nenibe Kueka. Berlin. Nahazoana alalana.
Nisy toe-javatra lehibe mitovy amin'izany nitranga saingy vitsy nitatitra tao Venezoelà tamin'ny taonain 1998. Nisy vato jaspa iray, milanja efa ho 30 taonina, fantatry ny vondrom-piarahamonina Pemón ho Nenibe Kueka, nesorina tamin'ny toerana voajanahary misy azy ary nentina hatao fampirantiana tao amin'ny zaridaina metirôpôlitana Tiergarten ao Berlin, Alemaina. Ity sombim-bato goavana ity dia tafiditra anatin'ny tetikasa iray antsoina hoe Global Stone, nampiroboroboin'ny artista ara-plastika Alemàna Wolfang von Schwarzenfeld.
Ny vahoaka Pemón dia foko iray monina ao atsimo atsinanan'i Venezoelà. Ny fiorenan'izy ireo dia hita mahazatra any amin'ny Gran Sabana [Hivoka Lehibe mitovy amin'ny toe-tany atsimon'i Madagasikara], ahitana tany milemaka misy vato toa tabilao antsoina hoe tepuyes.
Roapolo taona taty aoriana, mbola mora mahatafintohina ny vondrom-piarahamonina Pemón monina ao amin'ny valan-javaboarim-pirenena Canaima atsimon'i Venezoelà indrindra ity lohahevitra ity. Tafiditra ao amin'ny Tantara ara-pihariana an'izao tontolo izao eo amin'ity vondrom-poko ity i Nenibe Kueka hany ka mitarika fahabangana mangotatana eo amin'ny fomba fijery ara-kolontsaina ny fahalasanany any amin'ny toeran-kafa.
Ana Figueroa profesora Pemon. Image used with permission.
Ana Figueroa, mpampianatra iray ao amin'ny kolejy miavaka amin'ny fanabeazana ara-kolontsaina amin'ny fiteny roa, izay monina ao amin'ny vondrom-piarahamonin'i San Antonio de Roscio dia iray amin'ny manampahefana ao amin'ny foko. Amin'ny maha-mpikamban'ny Pemón azy no nizarany izao resaka izao:
Handany fotoana ela ny hanazavana ny tantaran'i Nenibe Kueka. Ao anatin'ny tantara nanabeazan'ny dadabe sy nenibe anay izy. Ny zavadehibe tokony holazaina angamba dia hoe ao anatin'ny fihavianay voalohany indrindra izy. Izy no fiandohana, ny reny voalohany. Ao aminy no miainga ny kolontsainanay Pemón. Avy any aminy no nivoahanay. Maharary tamin'ny vahoakanay tokoa ny tsy fitoerany eto aminay. Eny fa na ankehitriny aza dia miandry ny fiverenany izahay, na dia eo aza ny tolona lavitr'ezaka tsy maintsy nidiranay hatry ny ela.
Taorian'izany taona rehetra izany dia nametraka fangatahana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny governemanta Alemana hamerenana an'i Nenibe Kueka ny governemanta Venezoelana amin'ny alalan'ny Minisiteran'ny Raharaham-Bahiny sy ny Ivotoeran'ny Vakoka Ara-Kolontsain'ny firenena. Saingy niverimberina ny fanemoram-potoana noho ny paika ara-pitsarana tsy maintsy arahina amin'ny trangan-javatra tahaka itony, sy ny fampitaovana ilaina hamerenana ny vato ho any amin'ilay firenena Amerikana Tatsimo.
Na dia samy manana ny heviny aza ny olona amin'ny fangatahan'i Venezoelà, dia mifototra amin'ny fandresen-dahatra roa famerenana an-tanindrazana an'i Nenibe Kueka: dia ny hoe tsy ara-dalàna ny fanesorana sy ny fandefasan'ny governemanta Venezoelana sy Alemana azy, ary manan-drariny ny vondrom-piarahamonina hitaky ny famerenana ity zavatra manana hasina sy dikany ara-panahy ity ao amin'ny kolontsainy.
Ao amin'ny Twitter, maro ny mpisera no naneho ny faniriany hamerenana an'i Nenibe Kueka :
Manohy ny fanavotana an'Inenibenay Kueka izahay http://t.co/5iOMprSjN1. Ary nefa dia antsoin-dry zareo ho “ARTISTA” ilay olona nangalatra azy.
Hiaraka amintsika tsy ho ela ny Nenibentsika Kueka!! Haleloia!!
Mankalaza ny Andro Iraisampirenen'ny Vahoaka Teratany i Venezoelà! Ka takianay ny hamerenana an'Inenibe Kueka.
Androany, mbola miketraka tsy mihetsika any an-tanin'olonkafa ilay vato jaspa goavana. Amin'izao fotoana izao, mahatsiaro azy ny zanany ary te-hamerina azy an-tanindrazana. Mandritra izany fotoana izany dia miandry Inenibe Kueka ary toy izany ihany koa ny vondrom-piarahamonina Pemón.